रक्सीले झुम्म दीपेन्द्रले कसरी दुईवटा बन्दूक चलाए ? | Ratopati
दरबार हत्याकाण्डको २० वर्ष
रक्सीले झुम्म दीपेन्द्रले कसरी दुईवटा बन्दूक चलाए ?
‘दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानै भएन, अब पार लाग्दैन’
personश्रीप्रसाद पण्डित exploreकाठमाडौं access_timeजेठ १९, २०७८ chat_bubble_outline0
म ८ वर्ष राजदरबारमा बसेको मान्छे हुँ । कानून मन्त्रालयको सेक्सन अफिसरबाट मुगु जिल्लाको न्यायाधीश भएर गएँ । त्यहाँ १५ / १६ महिना मात्रै बसेको थिएँ, राजदरबारमा सरुवा गरे । बहुदल आएपछि ०४७ सालको साउनमा डा. आनन्दमोहन भट्टराई (हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश) र मलाई फेरि न्याय सेवामै फिर्ता गरियो । आनन्दमोहन त्यहाँको सहायक सचिव हुनुहुन्थ्यो, म उपसचिव थिएँ ।
जेठ १९ गते राति राजदरबारमा हत्याको घटना भयो । मलाई राति ११ बजेतिर एकजनाले फोन गरेर एकदमै साउती मारेको स्वरमा भने, ‘श्रीमान्, थाहा पाइबक्सियो ? दरबारमा त गोलीकाण्ड भएछ । बन्दुक हानेर सब सके, महाराजधिराज कोही पनि बाँकी छैनन् ।
हत्याकाण्ड भएको केही दिनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले समिति बनाए । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय अध्यक्ष हुनुभो । सभामुख तारानाथ रानाभाट र विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति दरबारले बनायो ।
यो हत्याकाण्डमा जसले पनि दीपेन्द्रलाई दोष दिने गरे । त्यो समितिमा अलिकति दरबारलाई देखेको र दीपेन्द्रको स्वभावका बारेमा अलि बढी थाहा भएको म मात्रै एकजना थिएँ । मलाई चाहिँ दीपेन्द्र त्यस्तो छन् भन्ने लाग्दै लाग्दैनथ्यो ।
हाराजधिराजभन्दा अगाडि मुमा बडामहारानी रत्न आइन् रे । त्यसको १० / १५ मिनेटपछि महाराजधिराज आए रे । राजा आएर मुमा बडामहारानीलाई दर्शन गरे रे । त्यसको एकैछिनमा एकदम कम्ब्याट ड्रेसमा शस्त्रसहित पूरा औपचारिक मिल्ट्री पोशाकमा भरर्र हान्दै आए रे । ए..ए... के गरेको ? के गरेको ? भन्दैथिए रे भरर्र हान्न थालिगए रे । राजालाई ताकी ताकी भरर्र मेसिन गनले हाने रे । पारसले नाई दादा, दादा भने रे । अनि उनलाई केही गरेनन् रे ।
#royal palace massacre#दरबार हत्याकाण्ड
दरबार हत्याकाण्ड छानविन समितिमा संलग्न पूर्वरजिष्ट्रार
कोरोना महामारीले भन्दा पनि राजनीतिक महामारीले अत्यायो : सीईओ रत्नराज बज्राचार्य
पानी नमिसाई दूध बेच्ने उपप्राध्यापक बाबुराम